Turkeys - ịzụlite, mmezi, na-elekọta n'ụlọ, karịsịa na-eto eto
Turkeys - ịzụlite, mmezi, nlekọta na ụlọ, nuances ndị bụ isi nke ịkọ ihe
Iji na - eto eto na - ahụ ike, ịzụlite, mmezi, nlekọta na ụlọ ga - eduzi dịka iwu ụfọdụ si dị. Ọ dị mkpa ịhọrọ ezigbo udiri anumanu ka nnụnụ wee tolite n'oge na-adịghị anya. Ọ bụghị ihe ọmụma ịmara banyere ọrịa ndị bụ isi.
Ihe dị n'ime turkeys n'ụlọ maka ndị na-amalite
Na nnụnụ ahụ adịghị arịa ọrịa, mgbe ha na-ahaziri ha ebe obibi, a ghaghị iburu ihe ụfọdụ chọrọ:
Ihe ndị dị na turkeys na-eto eto na-achọ ịnọgide na-enwe okpomọkụ na ọkwa ụfọdụ, ya mere, ọ gaghị adabere n'okpuru 10 Celsius C. Ọ bụrụ na ọ bụ oyi, anụ ụlọ ga-amalite ịgbu.
N'oge okpomọkụ na ebe nnụnụ na-edebe ya, ọ gaghị adị ọkụ. Ọ bụrụ na enweghị ezigbo ventilash, ihe ize ndụ nke ọrịa ga-abawanye.
Maka ndozi kwesịrị ekwesị, biko mara na iru mmiri agaghị eru 70% ma dị n'okpuru 65%.
Nlekọta na-agụnye ịmepụta ọkụ ọkụ na-ahụ maka ụda nke anụ ụlọ. Ọkụ ga-ere ọkụ ruo awa 14.
Ụdị nke turkeys maka ozuzu n'ụlọ
Ọ dị mkpa ịhọrọ oke nnụnụ, n'ihi na ọsọ nke ibu na-adabere na ya. Ụdị ndị ọkachamara ahọrọ bụrụ ndị kacha mma. Ụdị ụdị nke turkeys maka anụ ụlọ:
Bronze sara mbara. N'ebe ịta nri, ụdị ụdị a agaghị eto, ebe ọ bụ na ọ na-eri maka ụlọ na ọkụkọ. Nwanyi na-eto na 7-9 n'arọ, na ụmụ nwoke - 9-15 n'arọ. N'ime otu afọ, ìgwè a na-amị ruo nsen 120.
North Caucasian bronze. Ọfọn adabara nri nri ndụ. Nwanyị na - etoju n'arọ 7, na ụmụ nwoke - ruo 14 kilo. Maka oge ị nwere ike ibute nsen 80.
White broad-chested. Ụdị maka ọnọdụ ụlọ nwere ezigbo anụ anụ, ya mere, ụmụ nwoke nwere ike ito ruo n'arọ 25, na nwanyị - ruo 10 kilo. Nlekọta nke nnụnụ abụghị ihe siri ike, ebe ha na-eme mgbanwe n'ụzọ dị mma n'ọnọdụ dị iche iche. Ruo otu afọ na-enye 120 nsen.
Cross BIG-6. Na-eto eto n'ike ma na-enye ọtụtụ anụ nke dị elu, ya mere ụmụ nwoke na - etolite n'arọ 25, na nwanyị - ruo 11 kilogram. Nzuzu dị mgbagwoju anya site n'eziokwu bụ na ọ ga-emepụta nsị insemination.
Ebee ka eto eto na-eto eto?
Maka ịzụlite n'ọdịnihu, lekọta nzukọ nke ọnọdụ kwesịrị ekwesị maka ọdịnaya ahụ. Ọnọdụ maka ịzụlite ịzụlite chọrọ ohere maka ọrụ ahụ. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-ewuru cages maka nzube a maka oge okpomọkụ. Na nnụnụ anaghị efe efe, ha kwesịrị igbapụ nku ha. Nnụnụ ma ọ bụ cages kwesịrị ịnọ na ebe dị jụụ ka ụda olu dị iche iche ghara igbochi turkeys. Mgbe ị na-eje ije, ọ dị mkpa ilekọta ịmepụta ndo na-enweghị ihe site na ịwụnye ihe mkpuchi.
Cellular ọdịnaya nke turkeys
Iji maka ozuzu ozuzu na enyere aka ichekwa, ebe o bughi ihe di mkpa itinye akwa, na adianye, nke a na-eme ka uto nke anu na-abawanye uru ma nyere aka mee ka o doo anya ojiji nke ulo. Nkuzi nke turkeys n'ime mkpụrụ ndụ na-egosi nuances ndị a:
A na-edebe ụmụ nwoke n'otu n'otu, ebe nke a ga-eme ka ọmụmụ ha bawanye uru ma belata ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ. A na-atụ aro ka ị ghara ịnọ karịa mmadụ abụọ n'ime ụlọ.
Jide nnụnụ kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ abụọ, ebe ọ bụ na ha dị mma maka nchekwa.
Ka ị ghara ịta ahụhụ site na turkeys, ịzụlite, mmezi, nlekọta ụlọ bụ iji kpo oku, ọkụ, nri tankị na mmiri n'ime ụlọ. Nhọrọ kachasị mma maka ndị aṅụrụma bụ ndị na-ahụ maka micro-caterers, ebe ọ bụ na ha kachasị mma.
A naghị emepụta ngwa ngwa cellular maka turkeys, ya mere ha na-eme onwe ha.
Osisi kachasị ewu ewu: ogologo - 1 mita, obosara - 50 cm na ịdị elu - 45 cm.
Ebe maka idebe turkeys
Nnụnụ maka ịzụ nwa n'ụlọ kwesịrị ịdị ọkụ ma saa mbara, n'ihi ya, otu nnụnụ kwesịrị inwe ihe dịkarịa ala nke 1.5-2 m 2 . A ga-ahazi ụlọ maka turkeys iji chebaa atụmatụ ndị dị otú ahụ:
Iji hụ na ọkụ zuru ezu maka mita mita ọ bụla kwesịrị ịdị ike nke 5 watts.
Ụlọ ahụ ga-ekpo ọkụ na nke ọma.
A na-etinye nsị na elu 50-70 cm site n'ala. Ogologo a ga-agbakọọ site na ngwaahịa, n'ihi ya, isi ọ bụla nwere 50 cm.
Iji bie ndụ nke ọma, ịzụlite, mmezi, ilekọta n'ụlọ, na-egosi na iji akwa akwa akwa. Maka nke a, ị nwere ike ịhọrọ sawdust, ahịhịa ma ọ bụ ochie hay.
N'ebe ndị gbara ọchịchịrị, tinye ebe nests maka ịtọ hens. E kwesịrị idebe akwu maka nnụnụ ise.
Na mgbakwunye, iji lekọta, ịkwesịrị ịsa ahụ batrị maka ịsa ahụ, jupụta ájá na ájá. Jide n'aka na itinye ndị na-azụ nri na ndị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ.
Esi lekọta turkeys?
Ihe isi ike ndị na-eto eto na-ebili mgbe ị na-elekọta ụmụaka:
Jide ụmụ chick na akọrọ na ebe ọkụ. Igwe ọkụ kwesịrị ịdị gburugburu elekere, okpomọkụ dị nso na 36 Celsius.
Ilekọta turkeys pụtara iri ihe ruru ugboro asatọ n'ụbọchị. Akpa jiri akuku akọrọ akwakọta agwakọta ya na anu ocha. Na ụbọchị ole na ole, ị nwere ike ịbanye na menu chopped elu.
Nri dị mkpa ruo ugboro ise n'ụbọchị.
Na-azụ turkeys n'ụlọ
A ga-ahọrọ nri maka nnụnụ na-adabere n'ebumnuche nke ịkụ ihe, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na turkeys na-aga igbu egbu, nye ha ọka ndị ọzọ na karịsịa ọka wit. Iji mee anụ ahụ ụtọ, menu kwesịrị inwe akwụkwọ nri na elu. Ọ bụrụ na ịchọrọ nsen, mgbe ahụ nri kwesịrị ịgụnye ọtụtụ vitamin na mineral. Ihe mejupụtara nri maka turkeys gụnyere:
nri nri na vitamin, protein na ndi na-edozi;
ome ohia ;
sieips, carrots na poteto;
nettle, dandelion, clover na elu ndị ọzọ;
hay, salted salted na brooms si alaka - na oyi.
Kedu otu esi eri nri turkeys maka uto ngwa ngwa?
Ụkpụrụ nlekọta na-egosi na maka uru uru dị arọ, a na-eme nri ahụ ọ dịkarịa ala ugboro anọ n'ụbọchị. Nchịkọta nhọrọ kwesịrị ịgụnye osisi mgbochi na osisi ndụ ndụ. Ihe oriri maka turkeys kwesịrị ịgụnye ngwaahịa ndị dị otú a, na-enye ezigbo mmụba na ndụ dị ndụ: ngwaahịa ara ehi, àkwá, ọkwá, nri yist na ọka wit ma ọ bụ oatmeal. N'ụbọchị nnunu ahụ na-eri ihe dị ka 80 g nke nri fodder.
Ration nke turkeys, gram kwa isi kwa ụbọchị
Nri (afọ nnunu) Yaytsenoskost maka otu ọnwa, iberibe.
0 - ọnwa 3. Ọnwa isii Ọnwa 9 15 ọnwa Ọnwa 18
Mkpụrụ ọka na ọka wit 90 96 105 115 120
Okpokoro ihe ubi 30 30 30 30 30
Obi Ohia 3 5 5 10 10
Nri ma ọ bụ azụ azụ 1 5 7th 14th 16
Hay (ogwu ntụ ọka) 30 30 30 40 50
Egwu esi nri 150 150 150 130 120
Carrots, elu ọhụrụ 40 50 50 60 80
Shell, nzu 3 4 5 6 7th
Nri nri 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Nnu nnu 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Ọnụ 351 374 386 409 437
Ọnọdụ maka ịnọgide na-enwe turkeys na oyi
Maka ozuzu kwesịrị ekwesị n'oge oyi, ọ dị gị mkpa ịtụle ihe ndị dị otú a:
Achị na-adịghị amasị nro na drafts, ya mere n'oge oyi, lezie anya ka ha ghara.
Ihe omimi oyi nke turkeys choro idebe ochichi nke kwesiri ekwesighi, ya mere maka umuaka umuaka odi mkpa na opekempe nke awa ise di nma, ma ndi okenye, o buru awa 14.
Dị ka ozi dị ugbu a, turkeys nwere ike ịnagide obere frosts (n'ime elu -5 ° C), ma ọ bụghị ruo ogologo oge.
Rịba ama na site na nhazi nke ụlọ, nnụnụ nwere ike ime ka ụkwụ ha maa jijiji, ya mere jide n'aka na ị ga-eji ụda mmiri mee ihe. Iji kpuchie ala, ihe mkpuchi, ahịhịa ma ọ bụ ibe dị mma. Ịgbanwe akwụkwọ ntanetrị kwesịrị ịbụ nke kachasị izu abụọ ọ bụla.
A na-enyekwu aka nri n'oge oyi, nke mere na anụ ụlọ ga-enweta ike dị mkpa. Ịnwere ike ịgbakwunye mushrooms, mushrooms na steamed paini. Tinye obere ihe nko, ihe a na-eme ka a na-ata nri na ihe ndị ọzọ na feeder.
Maka ahụike, turkeys chọrọ vitamin D , yabụ, ma ọ bụ n'ụbọchị ndị na-enweghị ntu oyi, hapụ anụ ụlọ gaa n'okporo ámá, ma ọ bụ nye ha mmanụ azụ.
Ọrịa nke turkeys
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ụmụ nnụnụ, ọ dị mkpa ka ị mara banyere ọrịa nke turkeys, mgbaàmà, ọgwụgwọ na mgbochi. Ọrịa kachasị dị ize ndụ ụmụ anụmanụ na-eto eto bụ:
Ọrịa ọgbụgba bụ nnukwu ọrịa nke na-egbu ndụ. Maka mgbochi, ọ dị mkpa ịnwe ọdịnaya ziri ezi ma na-agbaso ụkpụrụ ọcha, nakwa ịme nkwarụ mgbe niile.
Paratyphus n'ọnwa mbụ nke ndụ nwere ike imetụta ụmụ chicks, ihe mgbaàmà ahụ gụnyere mmụba mmiri, enweghị agụụ na obere ọrụ. Maka ihe ngbochi na ihe ọṅụṅụ gbakwunye "Furazolidon" ma ọ bụ "Bọmbụ".
Ọrịa nje. A na-egosipụta ọrịa ahụ site na ncha na reddening nke anya na nasal. Maka ọgwụgwọ nke turkeys, dilution, mmezi na nlekọta na ụlọ na-egosi na iji "furazolidone" mee ihe.
A coccid. Mgbe ị na-azụlite turkeys, a na-ahụ ihe mgbaàmà ndị a: nku sag, ịjụ nri, ala aghara na stool na ọbara. Maka ọgwụgwọ, "Koktsidiovit" na "Amprolium" dị mma.
Conjunctivitis. Kpebisie ike na ọrịa redness nke anya. Maka nchebe iji gbochie nnụnụ site na nchịkọta, hụ na mmezi nke ọnọdụ okpomọkụ, ịdị ọcha na iwu ndị ọzọ nke ịhapụ.
Karịa aṅụ turkeys?
Site na ịmepụta ihe, ọ ga-ekwe omume iwelie onu ogugu nke chicks site na 60-65%, iji wusi nsogbu, ime ka uto, agụụ na ọrụ nke ulo ozuzu. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe site na ụbọchị mbụ nke ndụ. Ọ dị mkpa ịma ihe ị ga-eme na turkeys:
Nchịkwa ịnweta na vitamin. Ha dị mkpa maka ibu na ọgụ. Usoro nkwenye bụ ihe dị ka otu izu.
Ọgwụ nje na-eguzogide mmepe nke microflora pathogenic. Ha na-ebelata ihe ize ndụ nke ọrịa siri ike. Ọ dị mkpa ịnye ọgwụ nje dịka atụmatụ ụfọdụ si dị, ka ọ ghara imebi bacteria.
Immunomodulators. Nchebe nke ahụ na-aba ụba ma na-enyere aka ịbawanye anụ ụlọ siri ike.
Nyocha. A chọrọ ọgwụ ọjọọ iji gbochie ọgwụ nje iji mee ka dysbacteriosis. Ha na-emezi mgbaze.
Kedu ka esi tụọ okpomọkụ nke pusi?
Nkume maka nkịta
Ụdị kachasị ọnụ nke nwamba
Ụdị nnukwu nwamba
Hamster anaghị emeghe anya - ihe ị ga-eme?
Pancreatitis na nkịta
Kedu ka esi egbochi nkịta ka ogbuo?
Laktistop maka nkịta
Otu onye na-azụ atụrụ maka aka ya
Ntak emi nkịta nwere imi imi?
Top mgbakwasa nke ose seedlings n'ụlọ - esi eto ike seedlings?
Akpụkpọ ụkwụ na-agbazi - ụdị ejiji kachasị mma na ihe ha ga-eyi?
Malysheva - ụbọchị nke nri na osikapa
Aha maka nwa pusi
Kedu ihe bụ egbugbere ọnụ?
Denim obere uwe, nnukwu ihe
Oatmeal - uzommeputa
Mycoplasma genitalia - gini ka ọ bụ?
Poteto na chiiz na oven
Enterovirus - mgbaàmà
Potato casserole na anụ
Cindy Crawford banyere afọ ndụ ya: "Anaghị m agbalị ịghọ nwata ọzọ. Ọ bụ onye nzuzu na onye nzuzu. "
Nri na Italian
Ihe dị elu karịa Stallone nwere ike ịbụ ụmụ ya nwanyị atọ!
Chicken na akwukwo
Bright glowworms na-enwu gbaa
Ngwurugwu na cytomegalovirus
Psychology nke ìgwè mmadụ